တိုင်တွေ့တိုင်း မကိုင်နဲ့။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တိုင်တွေ့တိုင်း မကိုင်နဲ့။
Posted by Tawwin Pan on Jun 2, 2016 in Creative Writing, My Dear Diary | 15 comments
ကားဂိတ်တွေမှာ ကားစောင့်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကားလမ်းကူးချိန်မှာ တဖက်ယာဉ်ကြောမရှင်းသေးလို့ လမ်းလယ်မှာ ရပ်စောင့်နေရတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လမ်းသွားနေရင်း ကားမလွတ်လို့ လူကရှောင်ပေးရချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နှပ်နှပ်တွေညှစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်သွားတဲ့လမ်းမှာ ဓါတ်တိုင်လို ကိုင်စရာတွေ့ရင် သူမတို့ လူတတွေကတော့ အမှု့မဲ့အမှတ်မဲ့ လှမ်းကိုင်မိကြတာပါပဲ။ ဒီနေ့တောင် လမ်းထိပ်မှာ ရုံးဖယ်ရီစောင့်နေတဲ့သူတစ်ယောက်က ဓါတ်တိုင်ကို အသေအချာမှီပြီး ကျကျနန ဖုန်းပြောနေတာ ကို တွေ့လိုက်ရတော့ လောလောလတ်လတ်ဖြစ်ထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကြောင့် စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်သွားတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
သူမတို့ သံလမ်း လမ်းမကြီးရဲ့စည်ကားချက်ဆိုတာကလည်း မသိတဲ့သူများမြင်ရင်တော့ ပွဲဈေးကျင်းပနေတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ကားတွေ၊ စက်ဘီး၊ ဆိုက္ကားတွေအပြင် လူတွေနဲ့ပါ ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတဲ့ လမ်းဆိုတော့ လူလူချင်းရော၊ ကားတွေ ဆိုက္ကားတွေ ရှောင်ရတဲ့အချိန်မျိုးမှာ အနားမှာရှိတဲ့ ဓါတ်တိုင်တွေကို ကိုင်မိတတ်ကြတာပါပဲ။ ကလေးတွေဆိုလည်း ဓါတ်တိုင်ကိုဖက်ပြီးဆော့နေတတ်ကြတာပါပဲ။
အခုတော့ မေလ (၃၁)ရက်က လမ်းထဲက ကလေးတစ်ယောက် ဓါတ်တိုင်ကိုင်မိပြီး ဓါတ်လိုက်သေဆုံးသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ကြုံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဓါတ်တိုင်ဆိုရင် ယောင်လို့တောင် မကိုင်မိပါစေနဲ့လို့ ပဲ ပြောရတော့မလိုလို ဖြစ်နေပါပြီ။
လမ်းထဲမှာ သေချာစပ်စပ်စုစုလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ သံဓါတ်တိုင် (၂)တိုင်တွေ့ရပါတယ်။ အခုတော့လည်း အဲဒီ တိုင်ဘေးမှာ နောက်ထပ် ကွန်ကရစ်ဓါတ်တိုင် တစ်ခု ထောင်ထားတာတွေ့ရပါတော့တယ်။ အရင့်အရင်တွေတုန်းက လမ်းထဲက သစ်သားဓါတ်တိုင်တွေကို ကွန်ကရစ်ဓါတ်တိုင်နဲ့ အစားထိုး လဲလှယ်ဖူးပါတယ်။ သံဓါတ်တိုင်ကတော့ လဲလှယ်တဲ့အထဲ ဘာလို့ မပါသွားတာလဲဆိုတာတော့ မပြောတတ်တော့ပါဘူး။
အဲဒါမို့ ရွာသူရွာသားတွေအတွက် “အိုင်တွေ့တိုင်း ခြေမဆေးနဲ့” ဆိုတဲ့စကားပုံနဲ့ ဆင်တူ “တိုင်တွေ့တိုင်း မကိုင်နဲ့” လို့သာ ပြောချင်ပါတယ်။
ဒါလေးကတော့ 7daydaily ကနေတင်ထားတဲ့ သတင်းလေးပါ။
ဒီဘက်ခေတ်မှာ လူစည်းကားတဲ့နေရာမှာ လမ်းသွားရတာလည်း တကယ်ကိုမလွယ်တော့ဘူး။
ကိုယ့်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေမယ့်အရာတွေချည်းပဲ။ ဓါတ်တိုင်ဆိုတာကလည်း အမှု့မဲ့အမှတ်မဲ့ကိုင်မိတတ် ကြတာဆိုတော့ သတိပိုထားရတော့မယ်။
ခွေးတွေဝိုင်းကိုက်ခံရတဲ့ ကလေးလေးနဲ့ ဓာတ်တိုင်ကို ကိုင်မိတဲ့ကလေးလေးက ကျွန်မအတွေးထဲကို ရောက်နေတယ် . . . ရင်ထဲမှာ ဆို့နင့်နေမိတယ် . . .
ခွေးတွေဝိုင်းကိုက်ခံရတဲ့ သတင်းမကြားမိဘူးကော။ ခုတလော ဖေ့ဘုတ်မသုံးဖြစ်လို့ထင်တယ်။
ခွေးဆိုရင်ကြောက်တယ်။ အမျိုးထဲမှ အလိမ္မာဆုံးလို့ ဆိုရမယ့် ဦးလေး တစ်ယောက် လည်း ခွေးရူးရောဂါနဲ့ဆုံးသွားတာမို့။
ဟိုးးးးတလောကတည်းက လမ်းတွေ ပြင်ဖောက်ပေးသွားတာမှာ…
ရန်ကုန်မြို့ထဲက လမ်းအတော်များများက ကျယ်ပြီး..ကွန်ကရစ်လမ်းကောင်းတွေတော့ ဖြစ်သွားပါရဲ့။
ပလက်ဖောင်းနဲ့ ရေမြောင်းကလည်း မရှိ….
ဆိုတော့….မြို့ထဲ ကားမောင်းရင်…ပလက်ဖောင်းမရှိလို့..လမ်းပေါ်ဆင်းလျှောက်နေတဲ့လူတွေကို ရှောင်ရ
လမ်းပေါ် ရောက်နေ ကျန်နေခဲ့တဲ့ ဓါတ်တိုင်တွေကိုရှောင်ရနဲ့…
ဓါတ်ကြိုးတွေကို အဲ့လို ခနော်ခနဲ့တိုင်နဲ့ လမ်းဘေးတွေမှာ ထောင်ထားတဲ့နည်း မဟုတ်ပဲ…
တခြားနည်းတစ်ခုခုနဲ့ အစားထိုးစေချင်တယ်.. ။
တခြားနိုင်ငံတွေ လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို လေ့လာပြီးတော့ဆိုပါတော့ ….
အဲလိုလုပ်ဖို့ဆိုရင် တော်တော်ကို မလွယ်လောက်သေးဘူး။
သတိထားမှ ဒို့များက ယောင်ယောင်ပြီးကိုင်တတ်တယ်…
တိုင်တွေ့ မှီတတ်တဲ့ အကျင့်လေး ဖျောက်အူးမှပါ။
ကိုယ့်မှာက..ဖက်စရာ ဒေါ်ဖွားမေတို့…ဖွေးဖွေးတို့က..အနားမှာမှ မရှိတာ…
ကံပြင်ချင်ရင်တော့ကောင်းမှုများများလုပ်
အိမ်တအိမ်မှာ.. လူတယောက်စီမှာတောင်.. လိုချင်တာတွေ…ဖြစ်ချင်တာတွေ.. လုပ်ဖို့ ပိုက်ဆံလိုအပ်တာမို့.. အခုလို.. နိုင်ငံချီတဲ့ အင်ဖရာစရပ်ချာကိစ္စမျိုးတွေမှာ.. ဘီလီယံချီမယ့်ပိုက်ဆံတွေ ဘက်ဂျက်ငွေတွေ.. ဘယ်ကလာမလဲ.. တွေးကြည့်ကြဖို့လည်းလိုတာပေါ့…။
လူထုက ရွေးကောက်တင်ထားတဲ့.. အစိုးရမို့.. အစိုးရကိုပိုက်ဆံပေးဖို့လူတဦးချင်းစီမှာတာဝန်ရှိပါတယ်..။
ဆိုလိုရင်းကတော့.. အလုပ်လုပ်နိုင်သူတိုင်း.. အလုပ်လုပ်ကြ…။ အခွန်ဆောင်ကြဖို့ပါပဲ…။
အလုပ်မလုပ်ပဲ.. လေနဲ့ညာစားနေသူတွေကို ပေးကမ်း လှူဒါန်းနေတာတွေ.. တိခနဲ့ကို ဖြတ်ချဖို့က.. အထူးလိုလိမ့်မယ်…။
အစိုးရအနေနဲ့ကလည်း.. အလှူခံယူနေသူတွေအပေါ်.. အမြတ်ခွန်.. ၀င်ငွေခွန်တွေကောက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်..။
အခုတော့ လိုက်လဲနေပြီလို့ထင်တာပဲ ကျတော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ ကွန်ကရစ်တိုင်တွေဖြစ်သွားတာ ကြာပြီး။ ဓာတ်ကြိုးတွေကအစ ဖိုက်ဘာအုပ်ထားတဲ့ ကြိုးတွေ ဖြစ်သွားပြီ။
ကျေးဇူးပါ အိုင်တွေ့တိုင်းလည်းမဆေး သလို တိုင်တွေ့တိုင်းလည်းမကိုင်ပါဘူးဂျာ အဓိက ကတော့ဓာတ်လိုက်တာထက် စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့သုတ်ထားတဲ့နှပ်တွေ ဝါးပြီးသားပီကယ်တွေရဲ့ရန်ကိုကြောက်လို့ ???